Xiaomi Black Shark 2: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
UXiaomi usishiya neendaba ezininzi kwezi yure. Uphawu lwaseTshayina sele lubonisile iRedmi 7 kutsha nje, esele sikuxelele zonke iindaba. Ngoku, inkampani iveza i-smartphone yayo entsha yokudlala, iXiaomi Black Shark 2. Kwezi veki kuye kwakho ukuvuza okuninzi malunga nale modeli, eveza iindaba zazo Ibizakuba ngo-Matshi 18, njengoko kuye kwenzeka ekugqibeleni. Sele siyazi le modeli.
Uphawu lwesiTshayina yenye yezona zikhoyo kweli candelo lee-smartphones zemidlalo. Ngale Black Shark 2, uphawu luthatha inyathelo eliya phambili kweli candelo. Ifowuni enamandla amakhulu, nangaphezulu lee kunangaphambili. Le modeli kulindeleke ukuba ekugqibeleni isungulwe kwilizwe jikelele.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iinkcukacha ezintsha malunga nale modeli zifikile, esele ziyicacisile into yokuba izakuba yifowuni enamandla amakhulu, ubonakalise indlela yakhe nge-AnTuTu. Kwinkcazo-ntetho yakhe, le yinto esele yenziwe icace gca. Kuninzi okulindelweyo kule Xiaomi smartphone intsha. Luluphi uphuculo oluziswa luphawu?
1 Ukucaciswa kweXiaomi Black Shark 2
2 IXiaomi Black Shark 2: Amandla ngendlela yayo emsulwa
Ukucaciswa kweXiaomi Black Shark 2
Uyilo lweempawu ezikolu luhlu lugcinwe kwimodeli. Uyilo olusulungekileyo kakhulu lokudlala, ngokungathandabuzekiyo luphawu oluchazayo kolu luhlu lwegama laseTshayina. Ngokumalunga neenkcukacha, le Black Shark 2 ifika nophuculo olwahlukeneyo. Eyona processor ilungileyo kwintengiso isetyenzisiwe, ukongeza ekubeni inyuse kakhulu i-RAM. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
IsikriniI-6,39-intshi ye-AMOLED ngesisombululo se-FullHD + (2.340 x 1.080 pixels) kunye ne-19,5: 9 ratio
Inkqubo: IQualcomm Snpadragon 855
Ukugcina ngaphakathi: I-128/256 GB
Cámara traseraI-12 MP ngokuvula f / 1.75 + 12 MP nge-f / 2.2 eneFlash ye-LED kunye ne-2x zoom zoom
Ibhetri: I-4.000 mAh ngeNtlawulo ekhawulezileyo ye-4.0 ye-27W
Conectividad: I-nano SIM ezimbini, i-WiFI 802.11 ac, i-Bluetooth 5.0, i-aptX kunye ne-aptX HD, i-double-frequency GPS, i-USB Type-C
abanyeIsithethi esiphindwe kabini sestereo, isivamvo somnwe esikrinini
Ubukhulu: 163,61 x 75,01 x 8,77 mm
Ngaphandle kwamathandabuzo, uyilo yenye yezona zinto zibalulekileyo kolu luhlu lweshishini laseTshayina. Ke ngoko, le Black Shark 2 igcina uyilo esilubonileyo kuluhlu ukuza kuthi ga ngoku. Kule meko, ubheja kwimibala emibini, igqityiwe ngombala omnyama okanye isilivere. Ukuze abasebenzisi babe nako ukukhetha indibaniselwano abayithandayo kakhulu.
Amandla yenye into ebalulekileyo kwifowuni. Ngaphakathi sifumana iSnapdragon 855, iprosesa enamandla kakhulu esinazo kwiifowuni ze-Android namhlanje. Irhamncwa elikunika amandla amakhulu xa kufikwa kukwazi ukudlala ngawo onke amaxesha. Ukongeza, uphawu lusishiya nendibaniselwano ye-RAM, enye yazo ukuya kuthi ga kwi-12 GB. Ukuze ukusebenza kwefowuni kube ngaphezulu kokuqinisekiswa.
KwiBlack Shark 2 asinayo i-headphone jack, nangona uXiaomi eyenzele yona. Kuba ifemu isebenzisa ifayile ye- isithethi esiphindwe kabini sestereo ebekwe kwiiphelo zefowuni. Sinee-microphone ezintathu ezijolise kwimidlalo, ezimbini zazo ukucima ingxolo yangasemva kwaye enye inyusa ilizwi lomsebenzisi. Yintoni eya kuvumela amava angcono okudlala ngalo lonke ixesha kwesi siphelo siphezulu.
Kwelinye icala, le fowuni inesakhono sokuqonda imiboniso, iintshukumo, izixhobo okanye ukubetha, ukuze ishukume ngokusekwe kubo. UXiaomi ucacisa ukuba oku kwenzelwe ukunika amava emidlalo ye-4D kwifowuni. Ke iBlack Shark 2 izakushukuma ngendlela eyahlukileyo kuxhomekeke kwisixhobo esisetyenziswe kumdlalo. Yintoni egqithisile, Imida ebuthathaka kunye neyenziwe ngokwezifiso ifakiwe kumnxaba. Oku kuyakuvumela umsebenzisi ukuba acudise iifreyimu zesixhobo ukwenza isenzo kumdlalo. Ukusuka ekudubuleni, ukubaleka kwabanye abaninzi. Ivumela ukusetyenziswa okungcono ngawo onke amaxesha.
IXiaomi Black Shark 2: Amandla ngendlela yayo emsulwa
Emnxebeni sidibana inkqubo yokupholisa ulwelo ehlaziyiweyo, ebizwa ngokuba yiNkqubo yokuPholisa uLwelo oluPhucukileyo lwe-3.0. Yinkqubo enoxanduva lokugubungela indawo zefowuni ezishushu ngakumbi, ukongeza ekuncedeni ukunciphisa ubushushu kwibhodi yomama efanayo. Ukongeza, sinendlela yokusebenza ephezulu kule Black Shark 2. Enkosi kuyo, isantya seprosesa siyonyuswa, sivumela ukugcina inqanaba leFPS elizinzileyo ngalo lonke ixesha. Xa sisebenzisa le ndlela kwisixhobo, imigca eluhlaza eluhlaza iyakhanyisa ngasemva.
Ngapha koko, uXiaomi uphawule oko kukho inani lezincedisi kwifowuni, esivumela ukuba siyiguqule ngendlela ephawulekayo. Sine-GamePad 3.0, eqhotyoshelwe kumacala omabini ayo, ebonelela ngefowuni ngamaqhosha omzimba. Inokuvumela amava angcono okudlala. Kwelinye icala, sinendlela yokubamba, esivumela ukuba siyidibanise nomabonakude. Kukho imeko yokupholisa, inoxanduva lokunciphisa ubushushu befowuni ngeedigri ezili-10 kwimizuzwana nje eli-10. Yintoni eyongezelelweyo yokuncedisa kwinkqubo yokupholisa ifowuni.
Kule Xiaomi Black Shark 2 sifumana inzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen. Ukubheja uphawu lwesiTshayina kwakhona koku, emva kokufumana ibonwe kutshanje kwiXiaomi Mi 9 ngokunjalo. Kwibhetri, sinesikhundla se-4.000 mAh, esine-27W ekhawulezayo yokutshaja. Ukudityaniswa neprosesa kufuneka isinike ukuzimela okuhle.
I-Xiaomi's Black Shark 2 ngoku igcinwe ngokusemthethweni e-China. Uhlobo lwentengiso sele luyenzile ukuba ifumaneke kwaye ukwaziswa ngokusesikweni kuyakwenzeka nge-22 ka-Matshi kweli. Akukho nto sele ikhankanyiwe malunga nokwaziswa kwefowuni okwangoku. Nangona bekutshiwo iiveki ukuba le modeli iya kuba yeyokugqibela eza kuqaliswa kwiimarike ezintsha. Kodwa sinethemba lokuqinisekiswa kungekudala.
Malunga namaxabiso, Sele sinamaxabiso eenguqulelo ezine ukuba iphehlelelwe eTshayina. Zonke zikhutshwe ngombala omnyama kunye nesilivere. Amaxabiso abo ngala:
Imodeli ene-6/128 GB iya kubiza i-3.199 yuan (420 euros kutshintsho)
Inguqulelo ene-8/128 GB inexabiso nge-3.499 yuan, malunga ne-460 euro yokutshintsha
I-Black Shark 2 ene-8/256 GB ixabisa i-3.799 yuan (malunga ne-500 euro ukutshintsha)
Imodeli ene-12/256 GB iya kuxabisa i-yuan eyi-4.199, ejikeleze ama-550 eeuros ukutshintsha
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi Black Shark 2: I-brand entsha yokudlala ye-smartphone